जब २३ बर्षीय केटाले ३८ बर्षीय महिलासँग विवाह गरे….. कारण यस्ताे ! | Saajha Khabar
जब २३ बर्षीय केटाले ३८ बर्षीय महिलासँग विवाह गरे….. कारण यस्ताे !
एकजना २३ बर्षीय युवाले पैसाको लोभमा ३८ बर्षीय महिलासँग विवाह गरेका छन् । चिनीयाँ मिडियाहरुले उनीहरुको माया र विवाहका बारेमा चर्चा गरिरहेको छ । उनीहरु केही दिन अघि मात्र हैनानको क्यूएनघाई शहरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । उनीहरुको विवाह र प्रेम सम्बन्धका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलिरहेको छ ।
चिनीयाँ अनलाईन रिपोर्टका अनुसार बेहुली आफ्नो बेहुलाको आमाको तुलनामा केबल एक बर्ष मात्र कम उमेरकी रहेकी छिन् । साथै ती महिलाको साथमा पहिलो विवाहबाट भएको १४ बर्षीय छोरा पनि रहेको छ । उनी पहिलो पतिसँगको विवाहको केही समयपछि गर्भवती भएलगत्तै आफूभन्दा १५ बर्ष कम उमेरका यि प्रेमीसँग बस्दै आइरहेको बताइएको छ ।
सुरुमा केटाको आमाबाबुले ती महिलासँग आफ्नो छोराको विवाह गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर पछि महिलाको तर्फबाट ६ लाख ६० हजार युआन, केही मूल्यवान बस्तुहरु, एउटा फेरारी र अन्य थुप्रै अचल सम्पत्तिहरु दाइजो स्वरुप दिइएपछि उनीहरु पनि उक्त विवाहका लागि राजी भएका थिए । विवाहका लागि जम्माजम्मी ५० लाख युआन बराबरको दाइजो दिइएको थियो ।
३८ बर्षीय ती महिला एकदमै धनी रहेको र उनको अचल सम्पत्तिको कारोबार रहेको बताइएको छ । उनीहरुको विवाहको फुटेजबाट पनि उनी कति धनी रहिछन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । उनको शरिरभरि रहेका चम्किला सुनका गहना र सजावटाका साथै उनीहरु चढेको रातो रंगको स्पोर्टस् कारबाट पनि यस कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
केही मानिसहरुले ती नवविवाहित जोडीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएपनि केहीले भने दिएनन् । बधाई नदिनेका अनुसार उनीहरुले साँचो प्रेमका आधारमा विवाह गरेका होइनन । यो विवाह पैसाको शक्ति र लोभमा गरिएको बताइएको छ ।
Previous: ट्रेण्डिङ १ मा, नेपाल आइडका सागरको ‘पल्ला घरकी कान्छी नानी’
Next: हिड्दा हिड्दै एक्कासी मिन्स भएर बीचबाटो मै रगतको भल बगेपछी…(भिडियोसहित)